केशवराज जोशी काठमाडौं, १० जेठ
साधारण शिक्षक वा प्रवचक बन्ने सोच बोकेको एउटा युवकको गन्तव्य र यात्रा त्यसबेला अचानक मोडियो, जब एउटा एफएम रेडियोमा जागिर पायो ।
भर्खरै एफएम रेडियो खुल्ने क्रम तीव्र बनिरहेको बेला बोल्न रमाउने युवकलाई एफएममा काम गर्न पाउनु उसै पनि खुसीको कुरा थियो ।
आजभन्दा झण्डै २ दशकअघिको त्यो समय सम्झँदा अच्युत घिमरे अर्थात् आवाजले बाँचेका एक व्यक्ति निकै पुलकित बन्छन् ।
अच्युत घिमिरे । यो नाम अहिले नेपाली साहित्यमा कलम चलाउने प्रायः माझ सुपरिचित नाम हो । तर, यिनी लेखेर होइन, बोलेर प्रशिद्ध भएका हुन् । अझ भनौँ, अरूका सिर्जना पढेर ख्याति कमाएका हुन् अच्युतले ।
यिनको जादूमय आवाजले लेखनलाई जीवन्त तुल्याइदिन्छ । यिनले आवाज दिएपछि धेरैजसो रचनाहरूको स्वरूप नै फेरिन्छ । कतिपय सामान्य लेखन पनि विशिष्ट जस्ता लाग्न थाल्छन् यिनको आवाज पाएपछि ।
यिनीसँग सामान्यतया राम्रो मानिने आवाज पनि छैन, जसलाई ‘बोल्ड’ भन्ने गरिन्छ । तर, आफूले पाएको मसिनो आवाजलाई भाव र विचारको गति समातेर सटिक ढंगले दौडाउने कलामा माहिर छन् अच्युत । यही भएर त २ दशकदेखि एफएम रेडियोमा अत्यन्त धेरै सुनिने बनेका छन् यिनी ।
हो, यही अदभुत कलाले नै यिनलाई सबैको प्यारो रेडियोकर्मी बनाएको छ । सबैको प्यारो हुनुमा यति एउटै कुरा पर्याप्त छ त ? होइन नि, यिनको आवाज जति मिठो छ, वाचनशैली जति कलात्मक छ, त्यतिकै मिठासपूर्ण व्यवहार पनि छ । सबैको प्रिय हुनलाई उनलाई यी सबै कुराले साथ दिएका छन् ।
साहित्यप्रतिको समर्पणभाव लेख्ने र नलेख्ने भन्दा पनि साहित्यिक चेतनामा भर पर्ने घिमिरेको बुझाइ छ । आफूमा साहित्यिक चेत भएको विश्वास छ उनमा । कहाँबाट आयो त त्यो साहित्यिक चेत ?
सामान्य ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको मान्छेमा स्वभावैले अध्यात्मिक प्रभाव पर्ने नै भयो । हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू आद्योपान्त साहित्यले भरिपूर्ण छन् ।
साहित्यको रस यिनीभित्र कहिले र कसरी पस्यो ? ठ्याक्कै यकिन त यिनलाई पनि छैन । तर, पौराणिक साहित्यलाई हाम्रो सम्पूर्ण साहित्यको जग ठान्ने अच्युत तिनै पौराणिक कथा, कहानीहरू सुन्दासुन्दै आफूमा साहित्यको प्रभाव परेको हुन सक्ने विश्वास गर्छन् ।
मनको कुनै कुनामा रहेको त्यो सुषुप्त भावलाई जागृत तुल्याउने काम भने उनका विद्यालय शिक्षक शिवहरि लामिछानेले गरे । कक्षा ९ मा पढ्दा उनलाई तिनै गुरुमार्फत् नै लक्षणा, व्यञ्जनाको ज्ञान प्राप्त भयो । त्यसमाथि झापाली साथीहरूको आफूमा ठूलो प्रभाव रहेको बताउँछन् अच्युत ।
त्यही समयमा एउटै घरमा फरक कोठामा बस्दै आएका झापाका देवेन्द्र भट्टराई र गोपाल भट्टराईसँगै अन्य केही झापाली मित्रहरू साहित्य क्षेत्रमा आफ्ना लागि अर्को प्रेरणाको स्रोत बनेको उनी बताउँछन् ।
सुरुमा उनमा इञ्जिनियर बन्ने चाहना थियो । त्यसको तयारी पनि गरे । पढाइमा सधैँ अब्बल दर्जाका विद्यार्थी रहेका घिमिरेले विद्यालय शिक्षापछि विज्ञान विषय रोजे । राम्रा विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढ्नुपर्छ भन्ने जुन सामाजिक मान्यता रहिआएको छ, सोही मान्यतालाई अनुसरण गर्दै उनले विज्ञान विषय रोजेका हुन् ।
घिमिरेलाई सामाजिक व्यवस्थाले विज्ञानको बाटो देखायो तर आन्तरिक व्यवस्था अर्थात् मनले निरन्तर साहित्यतिर तानिरह्यो । सायद त्यसैले हो, रेडियोमा पनि उनको रोजाइमा साहित्यिक कार्यक्रम नै पर्‍यो ।
९ मंसिर २०५६, बिहीबार । त्यो दिनको स्मृति उनको मन, मस्तिष्कमा अझै पनि ताजा छ । नहोस् पनि किन ? उनको जीवनले यही दिन नै नयाँ दिशा पाएको थियो । त्यसपछि नै उनका सपनाहरूले निश्चित आकार पाउन थालेका थिए । त्यो दिन थियो, उनी एचबीसी एफएममा प्रवेश गरेको दिन ।
अहिलेको उनको जुन व्यक्तित्व छ, यसको जग हाल्ने काम त्यही विन्दुबाट सुरु भएको हो । रेडियोमा नजाँदासम्म उनलाई आफ्नो आवाज यति धेरै प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन ।
एफएम छिर्नमा पनि उनलाई गजबको संयोगले काम गरेको छ । आईएस्सी पढ्दा उनी ट्युसन पढाउँथे । उनीसँग ट्युसन पढ्ने एक जना विद्यार्थीले एचबीसी एफएमले कर्मचारी मागेको विज्ञापन फेला पारे । यो कुरा उनले आफ्ना शिक्षक घिमिरेलाई सुनाए ।
घिमिरेले एफएममा जाने आँट गरेनन् । काम गर्ने चाहना नभएर होइन, धेरैका सामु अभिव्यक्त हुन अलिक अप्ठ्यारो लाग्नु र रेडियोमा बोल्न सक्छु भन्ने कुरामा सङ्कोच हुनुका कारणले उनलाई एफएम पस्न गाह्रो लागिरहेको थियो ।
तर, विद्यार्थी जिद्दी स्वभावका थिए । उनी अच्युतको शिक्षणकलाबाट प्रभावित पनि थिए । घिमिरेको आवाज अरूले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने उनको चाहना थियो । त्यही चाहनाले उनले आफ्ना शिक्षकलाई हात तानेरै एफएमसम्म पुर्‍याए । आफैँले फर्म ल्याए । आफैँले भरे र आफैँले पेस पनि गरे । अर्थात् फर्म भर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थीले पूरा गरिदिए ।
जागिरका लागि ६ सय ५० जनाले फर्म भरेकामा १ सय ५ जना ‘सर्ट लिस्ट’मा परे । त्यो सर्ट लिस्टबाट पनि ३ जनालाई छनोट गरियो । उनका विद्यार्थीको प्रेमपूर्ण जबर्जस्ती काम लाग्यो । हो, छनोट हुने ती ३ जना नाममध्ये एउटा नाम थियो, अच्युत घिमिरे ।
भव्य प्रतिस्पर्धामार्फत् रेडियोकर्मीको रूपमा छनोट भएको त्यो क्षण सम्झँदा अहिले पनि उनलाई अपार आनन्द र गौरवको अनुभूति हुन्छ ।
घिमिरे रेडियो प्रवेश गर्दाको समय फोन इन कार्यक्रमहरू, अंग्रेजी र नेपाली मिसाएर जिब्रो लट्पटाउँदै बोल्ने शैली, रमाइला उखान टुक्काहरू जोडेर प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमहरू र भावुक लेखन तथा त्यस्तै भावुक वाचनसमेत भएका जीवनको केही वास्तविक त केही वास्तविक जस्तै बनाउन खोजिएका अवास्तविक कहानीहरू हिट भइरहेको समय थियो ।
तर, अच्युतले त्यो धारभन्दा विलकुलै फरक साहित्यको धार समाते र त्यसमा पनि विशेषगरी गजलसम्बन्धी कार्यक्रम चलाए । त्यो धारलाई स्थापित पनि गराए । कार्यक्रमको नाम थियो, ‘बुलबुल ।’
बुलबुलमा उनको गजल वाचनको कलाले त प्रशंशा पायो नै, गजलसँगै आएका पत्रहरूको वाचनले पनि श्रोतामाझ विशेष छाप छाड्न सफल भयो ।
यिनको त्यतिकै सफल कार्यक्रम थियो, ‘श्रुति संवेग’ पनि, जुन कार्यक्रममार्फत् यिनले थुप्रै आख्यान वाचन गरे । यिनको वाचनशैलीको नक्कल धेरैले गर्न खोजे तर वाचनमा यिनको जस्तो मिठास कसैले दिन सकेनन् ।
अहिलेसम्म नेपालका अधिकांश एफएमहरूले विभिन्न नाम दिँदै उनको जस्तै शास्त्रीय सङ्गीतको धूनमा गद्य वाचन गरिने प्रस्तुति ‘श्रुति संवेग’ जस्ता कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरे पनि उनको कार्यक्रमको मौलिकतालाई नै श्रोताले रुचाएका पाइन्छ ।
बोल्दा पृष्ठभूमिमा बज्ने ‘रंग सारे गुलाबी नजरिया’ बोलको पुरानो हिन्दी शास्त्रीय सङ्गीत पनि सायद यिनकै आवाजका लागि बनेको थियो किनकि यो सङ्गीत पनि धेरैले प्रयोग गरे तर यिनको आवाजलाई जस्तो कसैको आवाजलाई सुहाएन ।
स्कुल वा कलेजमा घिमिरेका साहित्यिक रुचि भएका साथीहरू थिए । उनीहरू अच्युतलाई आफ्ना रचना पढ्न दिन्थे । उनको वाचनशैलीको प्रशंशा गर्थे । पछि त्यस्तै प्रशंशा उनले एचबीसी पुगेपछि श्रोताहरूबाट पाए । आफ्नो वाचनशैली प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि त्यसपछि मात्र थाहा पाए उनले ।
काममा उनको लगावबाट प्रभावित भएर संस्थापकहरूले उनलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरे एफएममा । उनले त्यहाँ सरुमा कार्यक्रम म्यानेजर र पछि स्टेसन म्यानेजरको रूपमा जम्माजम्मी ७ वर्ष सेवा दिए । तर, उनीभन्दा माथि व्यवस्थापनमा अरू कोही नभएकाले व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो ।
एक सफल प्रस्तोताका रूपमा उनले आफ्ना श्रोताहरूलाई मात्र सन्तुष्ट तुल्याएनन्, कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरी लगानीकर्ताहरूको समेत मन जित्न सफल भए ।
२०६४ सालको फागुनबाट एचबीसी एफएम बन्द भयो । कारण थियो माओवादी द्वन्द्व । एचबीसी एफएम बन्द भएपछि २०६५ मा उनी उज्यालोमा गए । अहिलेसम्म पनि उनी उज्यालो एफएममै कार्यरत छन् ।
२०७१ सालबाट उज्यालोमा पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका घिमिरेले ५ वर्षसम्म कुशलतापूर्वक उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरे । नेपाली रेडियोका एक हस्ती गोपाल गुरागाईंसँग व्यवस्थापन र रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका काम सिक्न पाउनुलाई अच्युत आफ्नो भाग्योदयको अर्को फड्को मान्छन् ।
कार्यक्रम प्रस्तोताका अतिरिक्त स्टेसनका सबै कार्यक्रमको समय तालिका तयार गर्ने, कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण, तालिम, कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्ने, लगानीकर्ता र कामदार कर्मचारीबीचमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता कार्यमा पनि उनी उत्तिकै सफल रहे ।
रेडियोमा काम गरेको २ दशक बितिसक्दा पनि उनलाई आफूले अझै सिक्दै गरेको जस्तो लाग्छ । गतिला व्यक्तिहरू गुरु हुने र राम्रो संस्था कार्य क्षेत्र हुने हो भने सिक्ने क्रम कहिल्यै नसकिने उनको बुझाइ छ ।
भगवानप्रति गहिरो आस्था एवं विश्वास भएका घिमिरे आफूले पाएको अवसरलाई ईश्वरकै देन ठान्छन् । आवाज तथा वाचनशैलीलाई पनि भगवानको वरदान मान्छन् उनी ।
सकेसम्म विवादमा पर्न नचाहने घिमिरे कसैको पनि समर्थन वा विरोधमा उभिँदैनन् । उनी आफूलाई छन्द र गद्य, बहर र गैरबहरका विवादहरूबाट समेत अलग राख्न सफल भएका छन् । सबैले उनलाई अफ्नै खेमाको ठान्छन् । सबै उतिकै आत्मीय व्यवहार गर्छन् । उनी सबैका बन्न रुचाउँछन्, बनेका पनि छन् ।
अच्युत अतिप्रशंसाबाट पनि बच्न खोज्छन् । प्रशंसाको मात लाग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने घिमिरे जीवनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।
२०६१ साल अर्थात् राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समाचार सङ्कलनमा अहिलेको कोरोना अवधिको भन्दा सङ्कट थियो । त्यस समयमा एचबीसी एफएमले केही कर्मचारी कटौती ग¥यो । जागिर गुमाएका सबैलाई सो कुराको जानकारी दिने जिम्मेवारी यिनैको थियो । त्यो र त्यस्ता केही घटनाले भने अहिले पनि यिनको मनमा बारम्बार हिर्काइरहन्छ ।
त्यो क्षण सम्झँदा यिनलाई अहिले पनि नरमाइलो लाग्छ । तर, त्यस समयमा यिनीसँग अलिक मन खल्लो पारेका साथीहरू पनि अहिले भेट हुँदा उही आत्मीयताको भावसहित आउँछन् । साथीहरूको त्यो हार्दिकताले भने उनलाई केही शीतलता प्रदान गरेको अनुभूति हुन्छ ।
‘तपाईंको त्यसबेलाको बाध्यता नै त्यस्तै थियो’ भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रियाले उनलाई कति धेरै बुझ्ने साथीहरू पाएछु भन्ने लाग्छ रे !
नचिनेका नम्बरबाट आएका फोन हत्तपत्त उठाउँदैनन् उनी । सामाजिक सञ्जालमा पनि अत्यावश्यकबाहेकका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काउँदैनन् । यसले अनावश्यक रूपमा समय मात्र बर्बाद हुने उनको बुझाइ छ ।
रेडियोले उनलाई सबथोक दियो- पैसा, नाम, आत्मविश्वास । अरू पनि थुप्रै कुरा । सबैभन्दा ठूलो कुरा त अथाह माया गर्ने र सदैव सद्भाव राख्ने श्रोताहरू दियो । सायद त्यसैले हो, उनी आफ्नो सञ्चार कर्मबाट पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।
उनको अगाडि मात्र होइन, पछाडि पनि कुरा काट्नेहरू छैनन् । कुभलो चिताउनेहरू छैनन् । त्यस्ता कोही भएका भए त कहीँ न कहीँबाट आफूसम्म खबर आइपुग्थ्यो नि भन्ने उनको विश्वास छ । त्यसैले पनि घिमिरे आफूलाई भाग्यमानी रेडियो प्रस्तोता ठान्छन् ।
घिमिरेकै भाषामा रेडियो नामको सानो भाँडाको भरमा साहित्यिक जमातबीच चिनिन पाउनु ठूलो सौभाग्यको कुरा हो । नेपालीभाषीमाझ आफ्नो विशेष प्रभाव छाड्न सफल घिमिरे ठूलो जनसंख्या ओगट्नुभन्दा पहिचानको घनत्व बाक्लो बनाउनलाई बढी अर्थपूर्ण ठान्छन् ।
उनी सकेसम्म भीडभाडबाट टाढै रहन रुचाउँछन् । यही कारण रेडियो कार्यक्रममार्फत् चर्चाको शिखरमा रहे पनि घिमिरे २०७३ सालअघि उनकै भाषामा ‘अर्धभूमिगत’ जस्तै थिए ।
‘अझै लुक्न मन थियो, सेतो कपाल भइसकेपछि मात्र देखिन मन थियो’, घिमिरे भन्छन्, ‘तर, प्रकाशनगृह खोलेपछि देखिन बाध्य भइयो ।’
२०७३ सालमा उनले बलबल पब्लिकेशन स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
‘नचाहे पनि आखिर बाहिर आउनै पर्‍याे’, घिमिरे मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘त्यस समयमा फोटो लिन चाहनेहरूलाई फोटो खिच्नसमेत नदिएर कत्रो अत्याचार गरेछु जस्तो लाग्छ !’
यो सम्झिँदा उनलाई अहिले पनि पनि पछुतो लाग्छ रे ! अहिले पनि उनी व्यक्तिगत जीवनवारे खासै खुल्न चाहँदैनन् ।
श्रोताहरूको जुन किसिमको झुकाव उनीप्रति छ, श्रोताप्रति उनको सदभाव पनि त्यतिकै छ । भन्छन्, ‘कति सम्बन्धहरू केही दिन र केहीछिनमा बन्छन् अनि भत्किन्छन् तर मेरो श्रोताहरूसितको सम्वन्ध विगत २० वर्षदेखि अविच्छिन्न छ । यो कहिल्यै भत्केको छैन किनकि यो विशुद्ध भावनात्मक सम्बन्ध हो ।’
उनी मात्रै कर्ण (कान)का भरमा अमूर्त चित्रसँगको प्रेम नै अमर प्रेम हो र यसमा लेनदेन वा स्वार्थको लेस मात्र पनि गणना हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसैले त यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध लामो समयसम्म जीवित छ ।
यो २० वर्षको अवधिमा अरू कुरा कति कमाए, त्यो फरक पाटो हो तर प्रशंसक भने थुप्रै कमाए अच्युत घिमिरेले । सद्भाव राख्ने मनहरू पनि त्यतिकै कमाए ।
कतिपय निराश भएकाहरूले उनको कार्यक्रमबाट आशा पाएका छन् । नयाँ ऊर्जासहित बाँच्ने प्रेरणा पाएका छन् । कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्म गर्ने सोच बनाएकाहरूले समेत उनको आवाजबाट नयाँ उत्साहसहित नयाँ जीवनको सुरुवात गरेका केही उदाहरण छन् उनीसँग ।
उनले यो सबै योजनाबद्ध किसिमले गरेका भने होइनन् । काम गर्दै गए र यो सबै हुँदै गयो । सबथोक सामान्य रूपमै हुँदै गयो, जसरी सास लिने काम हुन्छ, हावा भित्र-बाहिर भइरहन्छ, त्यसरी नै । तर, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन हावा लिँदै छौँ र हावा छाड्दै छौँ भनेर ।
जब प्रशंसकहरू भेटमा अनुगृहीत हुँदै यस किसिमका अनुभूति सुनाउँछन्, उनको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ अनि जिन्दगीमा केही राम्रै गरिएछ भन्ने लाग्छ ।
कतै काममा अल्छी गर्न थालियो भने पनि यिनै कुराहरूले उनलाई थाक्ने अनुमति दिँदैनन् । त्यसैले त विगत २० वर्षदेखि समान ऊर्जा र अद्भूत जोशसहित निरन्तर सञ्चार कर्ममा लागेका छन् अच्युत ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको यस लकडाउनको खालि समयलाई पनि घरमै बसेर भरपूर सदुपयोग गर्दै आएका छन् उनले । लकडाउनअघि उनलाई आफ्नालागि श्रव्य माध्यम मात्र हो कि भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले बेलाबखत उनी फेसबुक लाइभमा पनि आउन थालेका छन् । रमाइलो कुरा के भने, उनको फेसबुक लाइभलाई पनि श्रोता तथा दर्शकहरूले त्यसरी नै रुचाएका छन्, जसरी उनका रेडियो कार्यक्रमहरू रुचाइएका थिए ।
अझ नयाँ श्रोता तथा दर्शकहरू थपिने क्रम जारी छ । त्यसैले दृश्य माध्यमका लागि आफू उपयुक्त पात्र होइन कि भन्ने उनको भ्रमसमेत निवारण भएको छ । फेसबुक लाइभबाट आएका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूले थप हौसला र उत्साह प्रदान गरेका छन् उनलाई । झण्डै १-२ वर्षमा कमाइने श्रोता, दर्शक २ महिनाको अवधिमै कमाएर उनी मख्ख छन् ।
सबैलाई मनपर्ने आफ्नो आवाज उनी आफैँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त ?
‘सामान्य’, उनको सरल उत्तर यही हो । तर, केही वाचनहरू भने औधी मनपरेका छन् उनी आफैँलाई । केही उपन्यासहरूमा आफ्नो आवाज अझ खुलेको पाउँछन् उनी । भन्छन्, ‘सायद यो राम्रा किताबहरूको प्रभाव हुनुपर्छ ।’
उनलाई मनपर्ने धेरै किताबहरू छन् । त्यसमा पनि बीपी कोइरालाका सबै किताबहरू विशेष मनपर्छन् । त्यस्तै, पारिजातका शिरीषको फूल, परिभाषित आँखाहरू, डा. वानिरा गिरीको कारागारलगायतका कृतिहरूले उनमा विशेष छाप छाड्न सफल भएका छन् ।
अहिले उनलाई ‘यहाँनेर राम्रो भएन, तिम्रो यो मिलेन, त्यो मिलेन’ भन्ने कोही छैन । अहिले पनि आफ्ना सबै कार्यक्रमहरू नियमित सुन्ने गर्छन् उनी । आफ्ना कमजोरी र त्रुटिहरू आफैँ खोजिरहन्छन् र केही त्रुटि फेला परे अर्को कार्यक्रममा सच्याउने प्रयत्न गर्छन् । घिमिरेको यो सूत्र मिडियामै भविष्य बनाउन खोज्ने जो कोहीका लागि काम लाग्ने खालको छ । अझ नयाँ पुस्ताका लागि त थप उपयोगी हुने नै भयो ।
आफूसँग उपलब्ध र आसपासमा रहेका कुराहरूबाट सन्तुष्ट हुने स्वभाव छ उनको । यात्रा लामो छ । गर्नुपर्ने धेरै छ । पुग्नुपर्ने पनि टाढै होला तर अहिलेसम्मको जीवनमा उनले जेजति पाएका छन्, यसबाट पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०७:५७:००
जापानको भीमकाय पत्थर खोपेर बुद्ध खोज्दै मञ्जुल
तलब नपाएर कामदार मारमा, व्यापार नभएर व्यवसायी मारमा
तलब कहिले आउँछ दाइ ?
संघ नायकप्रति प्रार्थना
कोरोना कहरका बीच अर्को चुनौती प्राकृतिक प्रकोप